Ingaphambili elifudumele: liyini, lakhiwa kanjani nezimpawu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi izindimbane zomoya ziyizindikimba ezinkulu ezisemkhathini lapho kunezimo zomswakama nezimo zokushisa ezihlukile eziveza uhlobo lomoya oshisa phansi esibhekene nawo. Lezi zindimbane zomoya zamukela izici zendawo ezakheke kuyo futhi zincike ekunyakazeni ezikhiqizayo lapho zidalwa. Ngokwokusimama kwenqwaba yomoya singathola izinhlobo ezahlukahlukene zezingqimba. Namuhla sizokhuluma ngakho ibunzi elifudumele kanye nezici zabo.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemvelaphi nemiphumela yengaphambili elifudumele, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Izindimbane zomoya nokuzinza komkhathi
2 Ingaphambili elifudumele
3 Isimo sezulu esifudumele ngaphambili
Izindimbane zomoya nokuzinza komkhathi
Ukuze siqonde ukuthi iyini indawo efudumele, kufanele sazi amandla asemkhathini maqondana nokusebenza kwenqwaba yomoya. Ukusimama kwazo zonke izindimbane zomoya yikhona okunquma isimo sezulu sasemkhathini esenzeka endaweni ethile. Uma sinomoya ozinzile sikhuluma ngendawo lapho ukunyakaza kungavunyelwe ngokuma. Ngakho-ke, ukwakheka kwamafu emvula akunakwenzeka. Lapho kunokuzinza komkhathi, kufanelekile ukukhuluma ngama-anticyclone. Ngenkathi umoya ozinzile uthanda isimo sezulu esihle.
Ngakolunye uhlangothi, lapho kunomoya ongazinzile, siyabona ukuthi ukunyakaza okumi mpo kuyathandwa futhi amafu emvula akhiqizwa ngesimo sezulu esibi. Lezi zimo zihlotshaniswa nokudangala kwazise kukhona ukwehla kwengcindezi yasemkhathini nokwakhiwa kwesiphepho.
Uma isisindo somoya sijikeleza ngaphezulu kwendawo epholile, kubhekwa njengomoya oshisayo. Ukunyakaza kobuso obunamazinga okushisa aphansi kuzoqala ukupholisa ingxenye esondele kakhulu emhlabathini. Ngale ndlela, njengomoya ebusweni iqala ukuphola iba lukhuni futhi isinde. Ngalolu hlobo lwezimpawu, ukunyakaza komoya okuqondile kuyavinjelwa, ngaleyo ndlela kwakheke umoya ozinzile. Lokhu kuzinza kuveza ukuba nemimoya ebuthakathaka, ukuguquguquka kokuma mpo okubanga ukwanda kothuli lokungcola okukhona ezingqimbeni ezingezansi. Lokhu kuzinza kuyinkinga emadolobheni angcoliswe kakhulu. Sibona nobunye ubunzima bokubonakala okugcwele namafu ambalwa ngokukhula okuqondile.
Ngakolunye uhlangothi, uma ubukhulu bomoya bujikeleza ngaphezulu kobuso obufudumele kunalokho obubizwa ngokuthi yi-cold air mass. Njengoba ijikeleza ngaphezulu, umphumela ohlukile kulowo esiwuchazile uzokwenzeka. Kuzoqala ukushisa ezansi kwayo bese ziba minyene kakhulu, ezizovumela ukunyakaza okuqondile. Lokhu kuphenduka isigaxa somoya esingazinzile esidala ukwanda kwamandla omoya, ukuthuthuka kokubonakala, kepha ukuthuthukiswa kwamafu nemvula.
Njengoba sesibonile, ubukhulu bomoya buchazwa ngokuba nezimo ezifanayo zokushisa nomswakama kuwo wonke. Kungakho-ke kufanele sihlukanise izindimbane zomoya ngokungaqhubeki. Ngokuya ngezimpawu zomkhawulo womoya osindayo, singabona ukwakheka kwangaphambili okufudumele, indawo ebandayo, ingaphambili noma indawo emile ngaphambili.
Ingaphambili nokufudumala kwakheka lapho inqwaba yomoya ofudumele ifinyelela komunye umoya obandayo. Umoya oshisayo uvame ukukhuphuka ngaphezu kwesisindo somoya ngezinga lokushisa eliphansi kakhulu. Le nqwaba yomoya enezinga lokushisa eliphansi yaziwa ngegama lomkhakha obandayo. Lapho inqwaba yomoya ishayisana, ukufingqa nokwakheka kwamafu okulandelayo kubangelwa. Isici esiyinhloko sangaphambili nesifudumele ukuthi sinomthambeka omncane. Lokho kusho ukuthi, imvamisa ihamba ngejubane elijwayelekile cishe elingu-30 km / h futhi inokuphakama kwesembozo sefu cishe esingamakhilomitha ayi-7. Lokhu kusho ukuthi amafu avelele aphansi naphakathi.
Amafu nemvula kuyakhula eduze kwendawo yokuxhumana phakathi kwalezi zixuku ezimbili zomoya. Phakathi kokuvela kwamafu okuqala nokuqala kwe- imvula kungenzeka phakathi kwamahora angama-24-48.
Isimo sezulu esifudumele ngaphambili
Ake sihlaziye ukuthi isimo sezulu sisilethelani. Isimo somkhathi esibangela ingaphambili nokufudumala siqala ngokuvela kwamafu aphezulu. Lawa mafu aphakeme ayaziwa njengamafu e-cirrus. Bajwayele ukuba sezingqondweni noma eduze kwengqondo amakhilomitha ayi-1000 noma ngaphezulu ngaphambili. Ukwehla kwengcindezi kuvame ukuqala ngenxa yokwenyuka komoya ofudumele nokuhoxa komoya obandayo.
Kancane kancane, siyabona ukuthi isibhakabhaka siba namafu kanjani njengoba sisondela engxenyeni ebaluleke kakhulu yomugqa ongazinzile. Amafu weCirrus aba ku-cirrostratus ekhulisa kakhulu ngokwengeziwe ukwakha i-altostratus. Ngokuya ngokuntengantenga kwaphambili, kungahle kube nomthelela wokuconsa okuthile lapho kwakhiwa lawa mafu. Siyabona ukuthi amanani wengcindezi ayaqhubeka ukwehla futhi isivinini somoya siyakhuphuka. Siyazi ukuthi umoya uya ohlangothini lwalezo zindawo lapho kunengcindezi encane. Ngakho-ke, uma kuba nokwehla kwengcindezi ebusweni njengoba umoya oshisayo ukhuphuka, umoya uzoya kulolo hlangothi.
Ekugcineni, kuvela i-nimbostratus. Lezi zinhlobo zamafu zitholakala ngaphambili futhi zingabaphikisi bezulu elibaluleke kakhulu. Umoya ufinyelela umfutho wawo omkhulu futhi ingcindezi isancipha. Amafu aphansi nawo ajwayele ukufika, njengezintambo ezakhiwa umswakama owandayo ngenxa yemvula ekhiqizwayo. Amanye alawa mafu awodwa anesibopho sokufihla amanye amafu aphakeme futhi akhiqize inkungu engaphambili. Kwesinye isikhathi, Le nkungu inganikeza izinkinga zokubonakala emkhathizwe.
Imingcele ihamba phambili ibuthakathaka kakhulu futhi imvamisa ikhiqiza imvula ebuthaka futhi elinganiselayo. Isici esivelele ngaphambili nasifudumele ukuthi, yize kuyizimvula ezinesilinganiso esiphansi futhi ezibuthakathaka, zisebenza endaweni enkulu yomhlaba futhi isikhathi eside. Lezi zivame ukuba yizikhathi ezibandayo ekwindla sekwephuzile noma ekuqaleni kwentwasahlobo noma ebusika. Ngalesi sikhathi imvula ingathatha isimo seqhwa futhi iguqulwe ibe semvula futhi iphele emvuleni.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngephambili elifudumele nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ingaphambili elifudumele